शरीरमा प्रोटिनको कमीले समस्या आउला, कस्ता हुन्छन् लक्षण ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com शरीरमा प्रोटिनको कमीले समस्या आउला, कस्ता हुन्छन् लक्षण ? - खबर प्रवाह
शरीरलाई फिट राख्नका लागि प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ । यसले तपाईको मांसपेशीलाई मजबूत बनाउँछ भने सवै शरीरमा यसको आवश्यकता पर्छ । शरीर का लागि अन्य पोषक तत्वका अलावा प्रोटिन अनिवार्य हो । प्रोटिनको कमी हुँदा तपाईको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या आउन सक्छ ।
प्रोटिनका कमी कसरी थाहा पाउने ?
पर्याप्त मात्रामा प्रोटिनको कमीले तरल पदार्थको निर्माण कम हुन्छ । जसका कारण लचीलापनमा कमी आउँछ । तथा जोर्तीमा पीडा सहित मांशपेशीको दुखाइ बढ्न सक्छ ।
शरीरमा प्रोटिनको कमीका कारण सेतो रक्तकोषमा कमी हुन्छ र हेमोग्लोविन पनि कम हुन्छ । जसका कारण तपाईको रोग प्रतिरोधक क्षमतामा कमी आउँछ ।
शरीरमा प्रोटीनको कमीले रगको कमी हुन्छ । जसका कारण शारीरिक कमजोरी महसूस हुनाका साथ थकावट जस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ । यसका अलावा तपाईलाई पटक पटक भोग लाग्ने हुन्छ ।